Sweden oo aqoonsanaysa wadanka Falastiin | Somaliska
Raysal wasaaraha cusub ee Sweden Stefan Löfven ayaa shalay baarlaamanka Sweden ka hor cadeeyay in dowladiisa ay aqoonsanayso wadanka Falastiin. Sweden ayaa noqonaysa wadamada Yurubta galbeed kii ugu horeeyay ee si rasmi ah u aqoonsada dowladnimada Falastiin, iyadoo maraykanka uu ku tilmaamay ficilika Sweden mid lagu degdegay.
Löfven ayaa sheegay in xalka qilaafka u dhexeeya Falastiin iyo Israel lagu xalin karo labo wadan oo keliya sidaas darteedna ay dowladiisa aqoonsan doonto Falastiin. Madaxweynaha Falastiin Maxamud Abas ayaa sanadkii 2012 horgeeyay qaramada midoobay in dhulka Falastiin loo aqoonsado wadan rasmi ah, iyadoo inta badan wadamada UNka ay aqoonsadeen marka laga reebo kuwa reer galbeedka.
Löfven ayaa dhowr bilood ka hor ay la soo gudboonaatay fadeexad ku saabsan Falastiin, xiligii ay Israel duqaynta ku haysay Gaza isagoo sheegay xiligaas in Israel ay xaq u leedahay in ay isdifaacdo.
Madaxweynaha Somalia oo booqasho ku imaanaya Sweden
October 4, 2014 at 20:43
Waaw raysal wasaarahan cusub wuu dadaalay’ viva muslimka